Uvimba-mpepha Weendaba - UYILO LWEFOMU YESIXEKO → Uyilo lweeDolophu ezincinci ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Indawo yokudlala yanamhlanje ivumela ukonwaba okungathintelwanga kunye nokukhuselekileyo kwimoya evulekileyo hayi yabantwana bayo yonke iminyaka, kodwa nabantu abancinci. Ukudlala kwii-swings kunye nazo zonke izixhobo ezibekwe kwindawo yokudlala, ngakumbi xa zisenziwa kwinkampani yabahlobo, yinto entle ...
Okwangoku, ifanitshala yasesitalatweni ikwaquka nesigubungelo somthi. Ezi zinto zisebenzayo kunye nobuhle zinokwenziwa kwizinto ezahlukeneyo. Imithi ekhoyo kwindawo yasezidolophini sisiqinisekiso sempilo yabahlali, sokuphumla kunye neemvakalelo zobuhle zabantu abahlala kwindawo eluhlaza. ...
Iinkqubo zokuchacha ezisetyenziswa kwinkqubo yenkungu eyomileyo yenkunkuma inokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Okwangoku, xa sijonga indlela esebenzayo yokutshabalalisa amagumbi, izisombululo ezinjalo zihlala zithathelwa ingqalelo ngabo banembopheleleko yezempilo ...
Izikhululo zokubulala iintsholongwane / izitishi zococeko lwezandla yinto entsha kwisibonelelo sethu njengenxalenye yoyilo oluncinci. Sisisombululo esenza ukuba kube lula ukubulala iintsholongwane ngesandla kunye nokulahla inkunkuma. Khuphela iikhathalogu kunye noluhlu lwamaxabiso >> Ukuhlamba izandla kunye nokubulala iintsholongwane yimisebenzi ebalulekileyo evumela ...
Uyilo oluncinci luyilwe zizinto ezincinci zokwakha ezidityaniswe kwindawo yedolophu okanye zibekwe kwipropathi yabucala, zinika umlinganiswa othile kwindawo ayinikiweyo. Iintsika zekhonkrithi, iibhentshi zala maxesha, amashiti, iibhodi, iimbiza zeentyatyambo, imigqomo yenkunkuma, izitali zebhayisekile, ...
Kuyinyani ukuba ubuchwephesha bobugcisa bokuyila bubugcisa obuzimeleyo obunokuzisa ukoneliseka okuninzi kunye nezibonelelo zezinto eziphathekayo, kodwa indlela yokuqalisa ukusebenza njengomzobi ayilula okanye imfutshane. Ukongeza kwinqanaba elicacileyo lokufunda kunye nokufunda okunzulu, umakhi onqwenelayo kufuneka ...
Njengenxalenye yokuphinda kusetyenziswdwe kabusha ngumasipala, iibinternet zokucwangcisa inkunkuma zinceda ukugcina indawo kawonkewonke icocekile, ukuphelisa iingxaki zesifo kunye nokubonelela ngezibonelelo ezibonakalayo zokusingqongileyo ngokuchithwa kwenkunkuma kumhlaba wokulahla umhlaba. Iidolophu zinokucutha iindleko zokungena ...
14 Matshi 2020
Indawo yokuhlala elungileyo yeebhasi licandelo eliyimfuneko kuyo nayiphi na inkqubo yokuhamba kwezinto ezinobunzima edolophini. Yintoni eyenza ilunge iipropathi ezenza ukuba kugcinwe luphantsi kwaye lungamkeleki. Ukongeza, ibonelela ngokubonakala kunye nokufikelela ngokulula ebhasini, ...
Ibhodi yolwazi ihambe noluntu ukusukela ekuqalekeni kwexesha
Kunokuthiwa ukuzalwa kweempawu kunye neetafile kudala kunokubakho komntu kwiplanethi. Iindidi ezahlukeneyo zemiqondiso yolwazi esetyenzisiwe ukusukela oko bekusenzeka emhlabeni, elowo wakhonza ngokufanelekileyo iinjongo zolwazi. Ngokufunyanwa kwebronzi nesinyithi, umntu waqala ukusebenzisa ezi zixhobo ...
4 Matshi 2020
I-rack yebhayisekile - iintlobo kunye nezibonelelo
Iibhayisikile kufuneka zigcinwe phantsi kweemeko ezifanelekileyo, ke kuya kuba luncedo ukukwenzela i-rack efanelekileyo. Yimveliso ebanzi kangangokuba wonke umntu uya kuzifumanela irakhi yebhayisekile efanelekileyo, eya kwahluka ngokupheleleyo kuleyo ibonakala kuwo onke amanqanaba kwindawo yoluntu. Jonga ikhathalogu yemveliso ...
1 Matshi 2020
UKUBA uyilo lweBhaso lowama-2020 lwehlobo lweMetalco!
Siyazingca ukwazisa ukuba i-Smart BHLS Transoceânica Corridor eyenziwe nguGuto Indio da Costa ifumene iwonga elidumileyo le-IF Design Award 2020 kudidi lwe-Design Excelence kwindawo yokuhlala yebhasi esebenzisana nayo, eyinxalenye yeprojekthi ye-SMART CITY. Jonga ikhathalogu yemveliso ekwi-intanethi >> okanye ...
21 Februwari 2020
Umyili wezakhiwo usebenza nokucwangciswa nokuyilwa kwesakhiwo okanye isakhiwo. Abaqulunqi bayakwazi ukuhlalutya iikhonsepthi okanye izimvo zabathengi babo kwaye benze iiprojekthi ezizodwa zokwakha ngokusekwe kuzo. Umsebenzi womyili wokuqhekeka unokwahluka: ezinye zixabise kuyilo lwezakhiwo ...
Ucwangciso lwedolophu- yeyiphi kanye kanye?
Namhlanje, ukucwangciswa kwedolophu yenye yezona nzululwazi zifunekayo xa ujonga ukuba likhulu kangakanani inani labemi behlabathi elihlala kwizixeko ezijikelezileyo. Ngo-1800, ngaphezulu kweepesenti ezi-2 zabemi behlabathi bezihlala ezixekweni. Ngo-1950, elo nani lalikhuphukele kuma-30 epesenti. Kwaye ngoku ...
Umthetho wokwakha sisenzo esilawula kwaye sichaza imisebenzi kwicandelo loyilo, ulwakhiwo, udilizo kunye nokubekwa esweni kwezakhiwo. Lonke inqanaba lokwakha isakhiwo, ukusukela ekuyileni kwalo de liye kugqitywa, lifuna ukuthotyelwa komthetho wokwakha. Umthetho wezokwakha kunye nobuncinci bokwakhiwa komthetho ...
19 Februwari 2020
Iimbiza zegadi kunye nezinto zazo - yeyiphi eyona ilungileyo?
Ukucwangciswa kwegadi kufuneka kwenziwe ngononophelo olukhulu. Nangona kunjalo, nokuba umsebenzisi akanayo igadi enkulu anayo, kodwa ngumyezo omncinci kuphela, okanye i-balcony okanye ithala, inokudala nesiqwenga sendawo eluhlaza. Isiseko sayo iya kuba yimbiza zegadi, ezo ...
15 Februwari 2020
Ucingo luya kuba lolungileyo kwaye lomelele njengezithuba zocingo ezixhasayo. Nokuba loluphi na uhlobo lwezinto eziza kwenziwa ngazo, kufanelekile ukuba sazi izibonelelo, izinto ezingalunganga kunye nokusetyenziswa kwezithuba zocingo ezenziwe ngomthi, intsimbi, iipali zekhonkrithi kunye nentsimbi.
12 Februwari 2020
Imigqomo yenkunkuma yesitrato yanamhlanje njengenxalenye yoyilo lwasedolophini
Imigqomo yokulahla inkunkuma, efumaneka ezindleleni, kwiindawo zokumisa, kwiipaki zedolophu, kwiindawo zokudlala, kwiibhokisi zesanti, kwiigadi nakwizikwere zedolophu, ngamanye amaxesha kubhekiswa kuzo njengemigqomo yenkunkuma yasesitalatweni, imigqomo yezitrato, imigqomo yesixeko okanye imigqomo yenkunkuma yesixeko. Jonga ikhathalogu yemveliso ekwi-intanethi ...
3 Februwari 2020
Iibhentshi zePaki yinto ebalulekileyo kwifenitshala yasesitalatweni. Ngokwembono yemisebenzi eluncedo, zisetyenziselwa ukuhlala, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukucwangciswa kwendawo, ziyifenitshala yasezidolophini. Iipaki, izikwere, iigadi, izitalato kunye neendawo zokumisa izixeko zinikwe izitulo. Bona ikhathalogu ...
28 Januwari 2020
Uyilo lweedolophu ezincinci
Ifenitshala yesitrato liqela lezakhiwo ezincinci ezichaphazela kakhulu ukubonwa kwesithuba ngabasebenzisi bayo. Kungenxa yokusebenzisa izinto ezikhethwe ngononophelo kulwakhiwo oluncinci ukuba indawo ephuhlisiweyo ithathe ubume, intetho kunye, ngaphezu kwako konke, iba ...
Umbuzo malunga nexabiso